Hosia 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
11 “Mgbe Izrel bụ nwata, m hụrụ ya n’anya,+ n’Ijipt ka m si kpọpụta nwa m.+ 2 “Ha kpọrọ ha.+ Ka ha na-akpọ ha, otú ahụ ka ha na-apụ n’ihu ha.+ Ha malitere ịchụrụ ihe oyiyi Bel àjà,+ ha malitekwara isurere ihe oyiyi a pịrị apị ihe nsure ọkụ.+ 3 Ma, ọ bụ m kuziiri Ifrem otú e si eje ije,+ ọ bụkwa m na-eku ha n’aka;+ ma ha amataghị na ọ bụ m gwọrọ ha.+ 4 M ji ụdọ ụmụ mmadụ na-adọ ha, bụ́ ụdọ ịhụnanya,+ m wee dịrị ha ka ndị na-ekopụ yok n’agba ha,+ m jikwa nwayọọ wetara onye nke ọ bụla ihe oriri.+ 5 Ọ gaghị alaghachi n’ala Ijipt, ma Asiria ga-abụ eze ya,+ n’ihi na ha jụrụ ịlọghachikwute m.+ 6 Mma agha ga-agazu obodo ya niile+ wee laa ihe ntụchi ụzọ ya n’iyi, ripịakwa ha+ n’ihi atụmatụ ha.+ 7 Ndị m na-emeso m omume ekwesịghị ntụkwasị obi.+ Ha na-akpọ ha òkù ịlaghachikwuru onye dị elu; ọ dịghị onye na-ebili ma ọlị. 8 “Olee otú m ga-esi gbahapụ gị, Ifrem?+ Olee otú m ga-esi rara gị nye, Izrel?+ Olee otú m ga-esi mee ka ị dịrị ka Adma?+ Olee otú m ga-esi mee ka ị dịrị ka Zeboyim?+ Agbanwewo m obi m;+ n’otu mgbe ahụ, ọmịiko m ekporowo ọkụ. 9 Agaghị m ewe iwe dị ọkụ.+ Agaghị m ebibi Ifrem ọzọ,+ n’ihi na abụ m Chineke,+ abụghị m mmadụ, abụ m Onye Nsọ n’etiti unu;+ agaghị m eji iwe bịa. 10 Ha ga-eso Jehova.+ Ọ ga-ebigbọ dị ka ọdụm;+ n’ihi na ya onwe ya ga-ebigbọ,+ ụmụ ga-esi n’ebe ọdịda anyanwụ mara jijiji bịa.+ 11 Ha ga-amara jijiji dị ka nnụnụ wee si n’Ijipt pụta,+ sikwa n’ala Asiria pụta dị ka nduru;+ m ga-emekwa ka ha biri n’ụlọ ha,” ka Jehova kwuru.+ 12 “Ifrem ji ụgha gbaa m gburugburu,+ ụlọ Izrel jikwa aghụghọ gbaa m gburugburu. Ma Juda ka so Chineke na-eje ije,+ o kwesịkwara ntụkwasị obi n’ebe Onye Kasị Nsọ nọ.”